Home » Lahatsoratra farany farany » Fitsangatsanganana an-trano » Toerana 10 freelancer ambony indrindra eran'izao tontolo izao
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • fanabeazana • Entertainment • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Toerana 10 freelancer ambony indrindra eran'izao tontolo izao.
Satria manova ny fomba fiasantsika ny fanavaozana dizitaly, lasa zavatra taloha ny ora fiasana mahazatra.
Japana no firenena ratsy indrindra ho an'ny mpiompy, miaraka amin'ny naoty Freelancer 3.99/10 fotsiny. Izany dia noho ny tsy fahombiazan'ny ankamaroan'ny asa eo amin'ny fitadiavana asa tsy miankina, ny fahavitsian'ny zo ara-dalàna ho an'ny mpiasa, ary ny tsy fahombiazan'ny Global Gender Gap Index.
Singapore no firenena manana hafainganam-pandeha Internet haingana indrindra amin'ny 256.03 Mbps.
Ny Holandy dia manana fahalianana ambony indrindra amin'ny freelancer miaraka amin'ny fikarohana 1,305 isaky ny olona 100,000.
Toy ny fanavaozana nomerika dia manova ny fomba fiasantsika, ary ny ora fiasana mahazatra dia lasa zavatra taloha, ny manam-pahaizana ara-bola dia nahita ny firenena tsara indrindra eran-tany ho mpikarama.
Mba hanaovana ny fanadihadiana dia nomena isa ara-dalàna amin'ny 10 isaky ny lafin-javatra tsirairay ireo firenena, anisan'izany ny hafainganam-pandehan'ny broadband, ny vidim-piainana, ny tanjaky ny zon'ny mpiasa araka ny lalàna, ny tondro fahasambarana ary ny fisian'ny toerana iarahana miasa.
Firenena 10 tsara indrindra ho lasa freelancer:
laharana Anarana firenena Haingam-pandeha amin'ny alalan'ny Broadband Jolay 2021 (Mbps) Vidin'ny Broadband isam-bolana 2020 (USD) Fikarohana asa tsy miankina isaky ny 100,000 Zon'ny lalàna 2019 Fanondroana ny elanelana eo amin'ny lahy sy vavy 2020 Vidin'ny fiainana isan'olona, ​​isam-bolana (USD) Toerana iaraha-miasa isaky ny 100,000 Fanondroana fahasambarana 2017-2019 Score Freelancer
2 Novely zelandy 164.06 62.94 554 12 0.799 944.86 2.18 7.3 7.20
3 Espaina 187.88 43.43 689 5 0.795 719.37 1.58 6.401 6.53
4 Aostralia 85.32 59.25 964 11 0.731 974.16 1.95 7.223 6.49
7 Soisa 214.82 69.37 672 6 0.779 1,586.17 2.50 7.56 6.36
8 Litoania 132.18 13.35 599 6 0.745 617.42 1.64 6.215 6.35
9 Soeda 163.31 48.4 379 7 0.82 953.14 1.23 7.363 6.34
10 Irlandy 116.19 48.55 616 7 0.798 979.52 1.71 7.094 6.27
Singapore maka ny toerana voalohany ho toerana tsara indrindra hiasa amin'ny maha-freelancer amin'ny 2021, miaraka amin'ny isa 7.35. Singapore dia mahazo tombony amin'ny broadband izay sady mora ($33.43 isam-bolana) no tena haingana (256.03 Mbps). Mahery vaika ny asa manerana ny firenena, na dia tsy izy aza no toerana mora indrindra hipetrahana ary mbola misy toerana azo hatsaraina amin'ny lafin'ny naoty momba ny Happiness Index.
edwin ndugire hoy:
Oktobra 28, 2021 ao amin'ny 09: 07
Miaraha amiko amin'ny sehatra fanoratana lahatsoratrao. Mpanoratra lahatsoratra mahay aho manana traikefa telo taona amin'ny fitsipi-pitenenana ambony tsy misy plagiarisme.